ZoomInfo: Sheshisa Ipayipi Lakho Le-B2B Ngedatha Yenkampani Njengesevisi (DaaS) | Martech Zone
Uma udayisela amabhizinisi, uyazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthola izinkampani ezizoba khona futhi ulandelele labo abathatha izinqumo lapho… ingasaphathwa yokuqonda inhloso yabo yokuthenga ngempela. Izihlabani zokuthengisa ze-B2B zingamasleuth amangalisayo, ashaya ucingo ngemva kocingo koxhumana nabo bangaphakathi nabangaphandle abakhe nabo ubudlelwano ukuze bakhombe abantu abalungile ezinkampanini ezifanele – ngesikhathi esifanele.
ZoomInfo yakhe ehamba phambili emhlabeni jikelele Idatha njengesevisi (I-DaaS) inkundla yokusekela isu lakho lokuya emakethe nomaphi lapho wena noma amakhasimende akho ekhona emhlabeni. Yabo Idatha ye-firmographic kuhlanganisa:
106 million amarekhodi ezinkampani
Amarekhodi okuxhumana ayizigidi eziyi-167
140 million amakheli e-imeyili
50 million izinombolo zokudayela ngqo
41 million izinombolo zeselula
31,000 ubuchwepheshe obufakiwe
Lolu akulona uhlu olungaguquki… amarekhodi okuxhumana angaphezu kwezigidi eziyi-100 abuyekezwa nsuku zonke inethiwekhi ekhulayo yabanikeli bokuzithandela abaqinisekisa noma abengeze ulwazi olusha. Ukufunda ngomshini (ML) kanye Nokucubungula Ulimi Lwemvelo (I-NLP) ziphinde zisetshenziswe ukuze zithwebule idatha emithonjeni eku-inthanethi engaphezu kwezigidi ezingu-38 nsuku zonke - okuhlanganisa amawebhusayithi ezinkampani, izihloko zezindaba, ukufakwa kwefayela le-SEC, nokuthunyelwe kwemisebenzi. Futhi banabasebenzi abangaphezu kuka-400 abaqinisekisa futhi bathuthukise amathuluzi abo okucwaninga kanye ne-algorithms ukuze kunyuke ukunemba kuye ngaphezu kuka-90% ngesilinganiso sokufanisa esingu-99.8%.
Ukusetshenziswa ZoomInfoInkundla, inkampani yakho ingacwaninga, ikhombe, futhi ifinyelele amathemba angcono kakhulu e-B2B. Ukufakwa kwe-ZoomInfo, ukunemba, nokujula kubonwa njengokuhamba phambili embonini. Lezi zixazululo zizosiza amaqembu akho okuthengisa nawokuthengisa asheshise ukuthengisa ngokunciphisa isikhathi sakho sokuvala nokwandisa imali yakho engenayo njalo. Inkundla ihlanganisa:
Intelligence - chaza imakethe yakho, thola abathengi abafanelekile, ulandelele inhloso yomthengi, futhi uhlaziye izingcingo, imihlangano, nama-imeyili ukuze uhlaziye inqubo yakho ukuze uthuthuke.
ukuzibophezela - okulula ukuzisebenzisa izinhlelo zokusebenza zomdabu ezilula ukuxhumana futhi zixhumane nabathengi eziteshini zakho ezibaluleke kakhulu, okuhlanganisa i-imeyili, ifoni, nengxoxo yewebhusayithi.
I-Orchestration - ukukhulisa umkhiqizo wokuthengisa ngokwenza kusebenze izinqubo zemanuwali ezisekelwe emisebenzini efanele yokuhamba komsebenzi yangaphandle neyangaphakathi.
I-ZoomInfo Platform Izici Zihlanganisa
Xhumana Nosesho Lwenkampani - Chaza izimakethe, thola abathengi abafanelekile
Inhloso yomthengi - Finyelela amathemba alungele ukuthenga
I-Conversation Intelligence - Hlaziya konke ukuxhumana
I-Relationship Intelligence - Thatha oxhumana nabo nokuxhumana
Idatha-njenge-Service - Yenza kusebenze isu ledatha elihlanganisiwe
I-Sales Automation - Lungisa ukuxhumana kwefoni ne-imeyili
Ingxoxo Yewebhusayithi - Khomba futhi uhambise abaholi abaqeqeshiwe
Ukukhangisa Kwedijithali - Khomba izethameli ezenziwe ngendlela efanele
Isebenza kahle - Qalisa imisebenzi yokuya emakethe
Ukucebisa Okuhola - Faka idatha ngesikhathi sangempela
Ukuhlanganiswa - Faka idatha esezingeni eliphezulu kakhulu kuzinhlelo zokusebenza eziningi ezihlanganisa i-Salesforce, i-MS Dynamics, kanye I-Hubspot.
Ubumfihlo Bedatha, Ukungafihli, kanye Nokuhambisana
ZoomInfo ithobela ngokugcwele ekutholweni kwayo, ekugcinweni nasekugcinweni kwayo kwedatha yebhizinisi ye-B2B:
I-ZoomInfo iqinisekiswe i-ISO 27001, futhi sibheka ubumfihlo bedatha nokuvikeleka njengento ebaluleke kakhulu. Silandela izinqubomgomo eziqinile zokuqinisekisa ukuthi idatha esiyiqoqayo ihambisana nemithetho yakamuva. Futhi siyaziqinisekisa ngokwethu kuzinhlaka ze-EU-US kanye ne-Swiss-US Privacy Shield. Izinqubo zethu zokudlulisa idatha zithobelana nezimfuneko ezivela ku-European Union, United Kingdom, Switzerland, kanye nase-United States.
Ikhodi Yomphakathi ye-ZoomInfo
I-ZoomInfo ingumholi wesofthiwe yesimanje yokuya-emakethe, idatha, kanye nobuhlakani ezinkampanini ezingaphezu kuka-20,000 emhlabeni jikelele.
Qala isivivinyo sakho samahhala se-ZoomInfo
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: b2bb2b inhloso yomthengib2b uhambo lomthengiidatha ye-b2bb2b ukufanisa idathaucwaningo lwe-b2bidatha yobuchwepheshe be-b2bidatha yebhizinisiinjongo yomthengiuhambo lomthengiimininingwane yenkampaniubuhlakani bengxoxodaasidatha njengesevisiukuhlanganiswa kwedathaukukhangisa kwedijithaliidatha ye-firmographicindawoiso 27001ukucebisa umthofums Dynamicsidatha yokufunaubuhlakani bobudlelwanoukuthengisa okuzenzakalelayoukuzibandakanya kokuthengisaubuhlakani bokuthengisai-orchestration yokuthengisaukugeleza komsebenzi wokuthengisasalesforceingxoxo yewebhusayithizoomfo